Allende, Barceló na Sáenz de Urturi. Onyinye Liber 2020, National Children's and Literature and Planet | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Allende, Barceló na Sáenz de Urturi. Onyinye Liber 2020, Akwụkwọ'smụaka Mba na Youthmụaka na Planet
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Asọmpi na Awards, Ndị edemede, Akwụkwọ, ọtụtụ
N’ọnwa a nke ndị ode akwụkwọ, anyị nwere ezigbo ozi ọma. Enwere ndị mmeri atọ nke onyinye ikpeazụ na ihe dị mkpa enyere. Isabel Allende, nụkwa ewerewo ihe Nnwere onwe 2020 maka ọrụ edemede ya, Elia Barcelo el Nrite Mba maka Akwụkwọ Childrenmụaka na Ndị Na-eto Eto con Ihe Frankenstein nwere y Eva Garcia Saenz de Urturi naanị merie Onyinye mbara ala con Aquitaine.
2 Elia Barceló - National Nrite maka Akwụkwọ Childrenmụaka na Ndị Na-eto Eto
3 Eva García Sáenz de Urturi - Onyinye Planeta
La Federation nke ndị mbipụta Guilds nke Spain (FGEE) enyela onyinye a n’aka onye edemede Chile dịka onye edemede Latin America kachasị ama ama maka ọrụ ọgụgụ ya buru ibu.
Obi abụọ adịghị ya, Isabel Allende bụ otu n'ime ndị edemede kachasị agụ akwụkwọ n'ụwa nwere karịa E rere 74 nde akwụkwọ, na ọrụ 24 sụgharịrị karịa Asụsụ iri atọ na ndi nkatọ na ndi na agukwa ya tozuru oke. Na mmata ụwa bịakwutere ya na 1982 na akwụkwọ mbụ ya, Oflọ Mmụọ. Site n'ebe ahụ, ọrụ dịka Nke Lovehụnanya na Onyunyo, Eva Luna, Nwa ada, Paula, Onye Japan hụrụ n'anya, Karịa oge oyi na nke kacha nso-nso Osisi petal ogologo.
Emume inye onyinye a ga-adị 27 maka October na Arts Santa Mónica, na Barcelona, ​​zuru Ọfọn Nnwere onwe 2020.
Elia Barceló - National Nrite maka Akwụkwọ Childrenmụaka na Ndị Na-eto Eto
Elia Barcelo Ọ si Alicante wee mụọ Hispanic na Anglo-Germanic Philology. Ndụ na Innsbruck (Austria), ebe ọ na-akụzi nkuzi na klaasị Spanish na mahadum. Ọ na - ejikọ ọrụ na ọrụ edemede na onye edemede nke akwụkwọ maka ndị okenye na ndị na - eto eto nke atụgharịrịla gaa n'asụsụ 10 dị iche iche. Utu aha ha Ikpe nke onye omenkà obi ọjọọ y Cordeluna ha were Edebé Nrite maka Akwụkwọ Ntorobịa. Na otu isiokwu o bipụtara Opera Crime Case y Ndị Knights nke Malta.
Ugbu a emeriela POnyinye Mba maka Childrenmụaka na Akwụkwọ Ntorobịa 2020, ya na euro 20.000, site Ihe Frankenstein nwere. N’ime akwụkwọ ọgụgụ a, Barceló tụrụ ụtụ maka ọrụ Mary Shelley, ma buru ụzọ nye ya XXVII Edebé Nrite maka Akwụkwọ na Ntorobịa modality afọ 2019.
Kpakpando Nora, otu Nwa akwukwo umu akwukwo nke XNUMXst XNUMXst, na ọ ga-ebi n'etiti ọha mmadụ ahụ ma chee esemokwu ọdịnala ihu na nsogbu ndị metụtara omume ya. Ihe Frankenstein nwere Ọ bụ akwa mmiri nke mkparịta ụka n’agbata oge abụọ ma mee ka anyị tụgharịa uche n ’ahaghị nhata ndị nwoke ma nke ọkachamara ma nke mmekọrịta ọha na eze. N'otu aka ahụ, dịka ọ dị na ọrụ Shelley, ọ na-emetụtakwa ibu ọrụ nke ịrụzu ibu ọrụ na ịnakwere nsonaazụ nke omume anyị.
Eva García Sáenz de Urturi - Onyinye Planeta
Mgbe afọ gara aga, Nwaanyị Planet nke afọ a ga-agakwuru onye edemede Basque maka akwụkwọ akụkọ ya Aquitaine. na njedebe ugha Sandra Barneda, n'ihi na Oke osimiri iji nweta ebe a.
Eva Garcia Saenz de Urturi Ọ zụrụ dị ka dibịa anya, mana ọ ghọrọ onye ahịa kacha ere ahịa na Spain n'abali. Ọ malitere ibipụta akwụkwọ mbụ ya na Amazon, Saga nke ndi ochie (2012), nke n'ime izu abụọ naanị kpochara ahịa wee bụrụ ihe ịtụnanya. Ka oge na-aga, akwụkwọ akụkọ abụọ (nke ihe dị ka peeji 500) yana na 2016 o bipụtara usoro ama ama ya, nke dịbu na ụlọ obibi akwụkwọ Planeta: la Trilogy nke White City, mere nke Ngbachi nke White City, Mmiri nke mmiri na ndị nwenụ nke Oge. A usoro nke rere ihe karịrị otu nde ma nwee mmegharị ihe nkiri na nso nso a Daniel Calparsoro.
Sáenz de Urturi kọwara na Aquitaine bụ a thriller ochie, ụtụ maka Aha nke rose, nke Umberto Eco dere, dị ka ihe ngosi nke akwụkwọ mpụ na akụkọ ihe mere eme.
Sandra Barney, onye nke ikpeazu, weputara akwukwo nke ulo ikpe. Ihe akachasị mara dị ka onye nta akụkọ na onye na-egosi telivishọn, Barneda edeela akwụkwọ ise (isii na nke a) kemgbe ọ bipụtara atụmatụ mbụ ya. Na-akwa ọchị n'ikuku na 2013.
The gala ẹkenịmde n'abalị ikpeazụ na Obí nke Music nke Barcelona, na-agbaso ọnọdụ ahụike dị ugbu a ma bụrụ naanị ememme chiri anya na ndị ọbịa ole na ole.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Allende, Barceló na Sáenz de Urturi. Onyinye Liber 2020, Akwụkwọ'smụaka Mba na Youthmụaka na Planet
Chineke nke ijiji